Nyocha na amụma | Martech Zone
Monday, December 18, 2006 Thursday, June 11, 2009 Douglas Karr
ProBlogger nwere ihe ọzọ dị egwu Group Writing Project. (I nwekwara ike isonye, ​​kwa!)
Darren dị ka ịnwe onye nchịkwa onwe gị maka ịde blọgụ. Obere oge m na-ahụ post na ProBlogger nke ahụ abụghị nke mbụ. Echere m na Darren tinyere mgbalị pụrụ iche iji mee ka blọọgụ ka mma na ịntanetị.
Otu oru ndi otu a bu iweputa ihe okike, rant, wdg nke nyocha maka afo gara aga ma obu amuma maka afo na abia. M kpebiri na m ga-ntakịrị kere na-agbalị a Nchikota ma. N'okpuru ị ga-ahụ nyocha nke onwe m banyere ihe dị mma na 2006 na echiche m banyere ihe ga-adị ukwuu na 2007. Lekwasị anya na amụma 2007, echere m na m arụgoro nke ọma nke ịdekọ akwụkwọ mpaghara dị iche iche m blog na-emetụ aka ma na-echesi echiche ike banyere nduzi nke isiokwu ọ bụla na-ewere.
Kporie! Dị ka mgbe niile, a na-anabata ndị ọbịa. Na ijide n'aka na ị na-esochi na ProBlogger yabụ ị nwere ike ịchọpụta ihe onye ọ bụla ọzọ na-ede banyere ya.
Ọ dị ukwuu na 2006
Ọ dị ukwuu na 2007
Ma na Mwepụta
Social ịkparịta ụka n'Ịntanet
Intel Mac na XP
Intel PC nwere OSX
Dabere na ọdịnaya
Omume dabeere na
Ngwakọta Atụmatụ w / Email Weebụ
Ndị na-enye Ọrụ Ngwa
Onye Ahịa-Server site Net
Mebere ngalaba sava
Okwu Nkà na ụzụ
Ndị na-eri ihe n'ịntanetị
Dee 19, 2006 na 1: 23 AM
Ekwenyere m na ọtụtụ amụma gị Doug, ọ bụ ezie na anaghị m ahụ Zune na-enwe mmetụta dị ukwuu n'ahịa ọkpụkpọ mgbasa ozi. Edere m ndepụta nke amụma maka ọrụ ide otu.
Jisie na amụma ikpeazụ gị 🙂
Dee 19, 2006 na 9: 44 AM
Ekwesiri m ịpụ na Zune! Karịsịa ọ bụ naanị zụrụ ụfọdụ iPods maka ụmụaka m maka ekeresimesi. Ọ bụ ogologo m.
Daalụ maka chioma, achọrọ m ya! Mara onye mara mma 25-30 dị nde ochie na-ahụ nnukwu ndị nna na-alụbeghị di ma ọ bụ nna na-achọ ịde blọgụ na oge ha niile?
Dee 19, 2006 na 11: 30 AM
Mba, mana ọ bụrụ na achọta nke ọ bụla, aga m ejide n'aka na m ga-eziga ha ụzọ gị 🙂
Dec 19, 2006 na 12:01 PM
Oh, lee ezigbo ụzọ iji zipu amụma, ahụrụ m ya n'anya! Orderskè-ala-ala-ala na price na-enye ndị ọzọ online nhọrọ, gụnyere ndị a na-eji n'ọma ahịa ngalaba dị ka Amazon, ka ọbụna-abịa nso na-emetụ na ezie
Anyị sonyere na ọrụ a, kwụsịtụ ọ bụrụ na ị nweta ohere!
Dec 19, 2006 na 9:10 PM
Otu n'ime ntanye kachasị mma m hụworo ruo ugbu a na amụma dị mma. A na-ele blog gị ugbu a lol.
Mụ onwe m sonyere na asọmpi thius. Naanị na-eche darren itinye ya na post ya ọzọ
Ana m azụ blọgụ gị
Dec 19, 2006 na 9:22 PM
Daalụ, Mama Duck! Daalụ Ashish!
Dec 19, 2006 na 10:15 PM
Echefula ilele ndepụta a na njedebe nke 2007 🙂
Dee 20, 2006 na 12: 00 AM
Ga echetara m. Ihe ncheta m anaghị adịgide ogologo oge. 😉
Dee 20, 2006 na 7: 00 AM
Ọmarịcha amụma mmadụ… na nnukwu blog ..
Dee 20, 2006 na 10: 21 AM
Daalụ, Madhur! Kinddị nzaghachi ahụ na-eme ka m gawa!
Dee 21, 2006 na 10: 26 AM
Ọmarịcha ụzọ ị ga-esi buru amụma.
Wide Monitors - yep, ugbua na-ahụ ya.
Zune - Hmmm, a no m na ebe m ga-azuta otu.
Dec 28, 2006 na 3:40 PM
Obi ụtọ ịhụ na Zunes nọchiri iPod, dịka Windows XP na-ebupụ site na Mac OSX.
Enweghi ike ịhụ ihe mbu na - eme (ma na agbanyeghị ngwa ngwa), mana nwee olile anya maka onye nke abụọ ka ọ bụrụ eziokwu.
(Hey, nke ahụ ga-apụta na ndị PC niile nwere iPod ga-enweta IntelMac ma mekọrịta ya na ụfọdụ ngwanrọ Microsoft? Hm…)